Igumbi eli-2 elifanelekileyo, indawo yokupaka yasimahla, i-wi-fi ekhawulezayo, kwidolophu yakudala
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAlgirdas
Amagumbi ama-2 anamhlanje kwaye athokomeleyo akufutshane kakhulu nesikhululo sebhasi / isikhululo sikaloliwe.
Ifulethi isandula ukulungiswa.Inayo yonke into oyifunayo ukuze uhlale ukhululekile ngelixa undwendwela iVilnius okanye udlula nje.
Indawo yokupaka ibekwe ebaleni kwaye isimahla.
Kukho ukhetho lokuzijonga, ngoko ke akukho maxhala xa ufika emva kwexesha.
I-Apartment ibekwe kumgangatho wokuqala. Ibandakanya igumbi lokulala, igumbi lokuhlala, indawo yekhitshi kunye negumbi lokuhlambela.Igumbi lokulala linebhedi ekhululekileyo yobukhulu bokumkanikazi kunye negumbi lokulala. Igumbi lokuhlala elinesitayile linesofa yokulala, itafile yekofu kunye nekona yekhitshi.
I-Apartment ixhotyiswe ngokupheleleyo. Ifriji, imicrowave, isitovu, umatshini wokuvasa, iscreen esicwebezelayo seTV, iti, isixhobo sokomisa iinwele kunye nazo zonke izixhobo zasekhitshini zibonelelwe ukukwenzela lula.Indlu inezifudumezi zomgangatho ophantsi ezizimeleyo ezinokuthi zilawuleke ngokweemfuno zeendwendwe.
Ufikelelo lwe-intanethi yesantya esiphezulu sasimahla lukwakhona kwigumbi lokuhlala.
I-Apartment ilungele abantu aba-2, kodwa iyakwazi ukuhlalisa abantu aba-4 ngokulula.
I-Apartment ikwidolophu endala yaseVilnius, kwisithili sesikhululo esiseMbindi. Kwiminyaka embalwa edlulileyo esi sithili siye saba yenye yezona ndawo zifashisayo zesixeko, apho amandla okudala ajika abe ziimbono eziqaqambileyo, iikonsathi zasimahla, iincasa ezintsha, kunye neeprojekthi zangoku.
Cebisa iindawo zokutyela kunye nokusela kule ndawo:
- Van dumpling - ukuya kwi-5 min ukuhamba, Sopeno str. 10 (ukuba uthanda amadombolo);
- Čeburekinė - ukuya kwi-5 min ukuhamba, i-Sopeno str 3 (ilungele isidlo sasemini, ilungele uhlahlo lwabiwo-mali);
- I-duoninė kaJoffe - ukuya kuthi ga kwimizuzu emi-5 yokuhamba, iSopeno str. I-10 (isidlo sasemini kunye namaqebelengwane);
-Bulkine - ukuya kwi-3 min. hamba, Kauno str. 2 (indawo yekofu kunye neepastries);
-Uptown bazar - ukuya kuthi ga kwi-10 min ukuhamba, Kauno str. 16 (inkundla yokutya yezokutya ezahlukeneyo);
- Imarike yeHalės - 10 ukuya kwi-12 min ukuhamba, iPylimo g. 58 Eyona marike indala yaseVilnius. Indawo yokuthenga imveliso yasekhaya kwaye ufumane isidlo sasemini okanye isidlo sakusasa.KUFUNEKA undwendwele indawo ekuloo ndawo;
- Keulė Rūkė - 10 ukuya kwi-15 min ukuhamba, iPylimo str 66.Indawo ye-hipster ekhonza ibhega yehagu etsalwa kakhulu kunye neembambo edolophini;
- Dėvėti – ukuya kuthi ga kwi-10 min ukuhamba, Sodų str. 3.Indawo ye-Hipster yebhiya. Ethandwa ngabahlali.
IPeronas - ukuya kuthi ga kwi-10 min ukuhamba, ibha ethandwa kakhulu kwisikhululo sikaloliwe, indawo yokuya kubomi basebusuku, inikezela ngemisitho / iikonsathi ezahlukeneyo;
- Šnekutis - ukuya kwi-7 min ukuhamba. Sv. Stepono St. 8. Indawo yebhere yaseLithuania yendawo kunye nokutya.
Ngaphandle koko, vele uhambe uye kwisitrato saseVilnius. Yindawo yokutyela, iibhari, ii-pubs kunye neeklabhu zasebusuku.Ngokuqinisekileyo uya kuyifumana indawo oyonwabelayo.
-Iki Express super market encinci ibekwe ukuya kuthi ga kwi-5 min.Kauno str. 1.
- Iivenkile ezinkulu ze-Iki eziqhelekileyo ukuya kuthi ga kwi-10 min. ukuhamba zibekwe kwisikhululo sebhasi Sodų str. 22 okanye Mindaugo str. 25
Ukuba unomdla kwimisitho eVilnius nceda undwendwele indawo: http://www.vilnius-events.lt/en/
Ukuba unomdla wokubonwa kunye neemyuziyam nceda undwendwele: http://www.vilnius-tourism.lt/en/what-to-see/museums/
Umbuki zindwendwe ngu- Algirdas
Iindwendwe zamkelekile ukuba ziqhagamshelane nathi ngomyalezo okanye ngefowuni kuwo nawuphi na umcimbi. Siya kukuvuyela ukuphendula nayiphi na imibuzo, kungakhathaliseki ukuba inxulumene nefulethi kunye nezibonelelo okanye iingcebiso ngezothutho, iindawo zokutya okanye iindawo zokubona :)
Iindwendwe zamkelekile ukuba ziqhagamshelane nathi ngomyalezo okanye ngefowuni kuwo nawuphi na umcimbi. Siya kukuvuyela ukuphendula nayiphi na imibuzo, kungakhathaliseki ukuba inxu…
Iilwimi: English, Deutsch, Italiano, Polski, Русский, Svenska, Українська